TÜBİTAK wuxuu shaqaaleysiin doonaa farsamada Bilgem | RayHaber | raillynews
HomeGUUDShaqooyinkaTÜBİTAK wuxuu shaqaaleysiin doonaa farsamada Bilgem
09 / 12 / 2019 Shaqooyinka, GUUD
Xarsamada farsamada '4' waa la shaqaaleysiin doonaa si ay uga shaqeeyaan Xarunta TUBITAK Information iyo Security Security Information Center ee Xarunta Cilmi-baarista Teknolojiyada. Xilliga kama dambaysta ah ee arjiga: 13.12.2019
Inaad noqoto muwaadin Turki ah.
2) In aan laga mamnuucin xuquuqda dadweynaha iyo in aan la heysan diiwaan dambi oo ka horjoogsanaya inuu noqdo shaqaale dowladeed.
3) Inaanu lahayn cudur ama cudur la is qaadsiiyo oo ka horjoogsanaya isaga / iyada inay u gutaan waajibaadkiisa si joogto ah.
Ragga codsadayaasha ah, waa inaanay wax xidhiidh ah la lahaan adeegga milatariga illaa waqtiga kama dambeysta ah ee arjiga.
5) Ma aha in la helo da'da 35 taariikhda codsashada.
6) Lahaanshaha sannadaha 2 khibrad xirfadeed gudaha iyo soo bandhigida dukumentiyada laga helayo SSI iyo meheradaha shaqada inay leedahay khibraddii loo baahnaa.
7) Musharixiintu waa inay lahaadaan aqoonta iyo kartida maadooyinka soo socda.
• In laga qaybqaato mashaariicda dhismaha ee R&D.
• Inaad khibrad u leedahay diyaarinta mashruuca iyo faahfaahinta farsamada ee loogu talagalay rakibaadda farsamada.
• Khibrad sahaminta, tirada, qiyaasta qiimaha iyo bixinta horumarka.
• Adeegsiga wanaagsan ee Microsoft Office iyo barnaamijyada AutoCAD.
• Si aad u leedahay khibrad goobta dhismaha ee meelaha codsiyada.
• Dayactirka makaaneynta, kuleylka, rakibaadda pneumatic iyo nadaafadda si loo helo khibrad.
XUSUUS: shuruudaha iyo nidaamka lagama maarmaanka u ah codsiyada waxaa laga heli karaa websaydhkawww.tubitak.gov.t waa) Oo Turkey Association Business (TEO) codsiyada yayımlanmaktadır.iş bogga bogga İSKUR webka (https://esube.iskur.gov.tr).
Qorista Farsamo-yaqaannada TUBITAK Bilgem